လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအောင်မြင်မှုအတွက်အဆင့် (၁၂) ဆင့် Martech Zone
Social Media Marketing အောင်မြင်ရန်အဆင့် (၁၂) ဆင့်
စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 13, 2014 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 14, 2014 Douglas Karr
တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုအေဂျင်စီ BIGEYE မှလူများ ဒီ infographic အတူတကွထားတော်မူ၏ အောင်မြင်သောဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ကုမ္ပဏီများအားကူညီရန်။ ငါခြေလှမ်းများ၏အခွဲများကိုတကယ်နှစ်သက်ပေမယ့်ကုမ္ပဏီအများအပြားမှာကြီးစွာသောလူမှုရေးမဟာဗျူဟာ၏တောင်းဆိုချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်အရင်းအမြစ်များအားလုံးမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းငါသဘောပေါက်သည်။ ပရိသတ်ကိုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုသို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာနိုင်သောစီးပွားရေးရလဒ်များကိုမောင်းနှင်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိခေါင်းဆောင်များ၏စိတ်ရှည်ခြင်းထက် ပို၍ ကြာလေ့ရှိသည်။
သုတေသန ပြီးတော့သင့်ပရိသတ်ကိုသိအောင်လုပ်ပါ၊ သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပါ။
သင့်ရဲ့ဖော်ပြပါ key ကို performance ကိုညွှန်ကိန်းများ (KPIs) ။ သင်၏လူမှုရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုသင်အဘယ်အရာပြုလုပ်စေလိုသနည်း။ အောင်မြင်မှုသည်အရေအတွက်အားဖြင့်မည်သည့်အရာနှင့်တူသနည်း။
ရေးသား လူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး playbook ။ ပြဇာတ်စာအုပ်သည်သင်၏ KPIs၊ ပရိသတ်အကြောင်းအရာ၊ အမှတ်တံဆိပ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသဘောတရားများ၊ မြှင့်တင်ရေးဖြစ်ရပ်များ၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ အကြောင်းအရာအကြောင်းအရာများ၊ အကျပ်အတည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်များစသည်တို့ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသင့်သည်။
ချိန်ညှိပါ အစီအစဉ်ပတ်ပတ်လည်သင့်ကုမ္ပဏီ၏အဖွဲ့ဝင်များ။ မည်သူကပို့စ်တင်နေသည်၊ မည်သူတုန့်ပြန်သည်နှင့်မက်ထရစ်ကိုမည်သို့အစီရင်ခံသည်စသည့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုသတ်မှတ်ပါ။
မိနစ် ၃၀-၆၀ ကိုယူပါ တွစ်တာတွေ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပို့စ်များ၊ LinkedIn ပို့စ်များ၊ တံသင်များသို့မဟုတ်အခြားလူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုအချိန်ဇယားဆွဲရန်အပတ်တိုင်းသို့မဟုတ်လတစ်လအစပိုင်း၌။ ၄ င်းတို့သည်မူလစိတ်ကူးများ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုများသို့မဟုတ်အသုံးဝင်သောသို့မဟုတ်သင့်ပရိသတ်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှိသောပြင်ပအကြောင်းအရာများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများဖြစ်နိုင်သည်။
ဖန်တီး အကြောင်းအရာစာရင်းများ၊ ခေါင်းစဉ်များ၊ ဆက်နွယ်နေသောအချိတ်အဆက်များ၊ အလိုရှိသည့်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ စာရေးသူများ၏အမည်နှင့်လိုင်းတိုင်းတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်စီစဉ်ထားသောစာရင်းဇယားကိုအသုံးပြုထားသောအကြောင်းအရာဘဏ်တစ်ခု။
My Posts အချိန်ကုန်ခံထိုက်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ။ ထင်မြင်ချက်ကိုဝေမျှရန်အရေးကြီးသည်။
အားလုံးကိုကုသပါ သီးခြားလူမှုလမ်းကြောင်းများ။ လိုင်းများအားလုံးတွင်တူညီသောစာကိုမတင်သင့်ပါ။ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီ၏နောက်ကွယ်ရှိပရိသတ်ကိုသူသတိရပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုခန့်အပ်ပါ အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာနှင့်အဆိုးမြင်မှုကိုတုံ့ပြန်ရန်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။ မှတ်ချက်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များကိုလျစ်လျူမရှုပါနှင့်!
အချိန်ဇယားအစီရင်ခံခြင်း! သင်၏ရည်မှန်းချက်များအပေါ် မူတည်၍ မက်ထရစ်အစီရင်ခံမှုသည်အပတ်စဉ်၊ လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်လတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ပြန် သင့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုမှန်မှန်။ အကယ်၍ သင်၏အစီအစဉ်ရှိတစ်ခုခုမှအလုပ်မလုပ်လျှင်၊ ပရိသတ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်၎င်းကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ် A / B စစ်ဆေးမှုအကြောင်းအရာကိုပြောင်းပါ။
Tags: ပရိသတ်ပရိုဖိုင်းမင်္ဂလာပါအမှတ်တံဆိပ် personasစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသဘောတရားများအကြောင်းအရာဘဏ်အကြောင်းအရာအကြောင်းအရာများအကြောင်းအရာအကြောင်းအရာများပြိုင်ပွဲအကျပ်အတည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်များဧည့်ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်key ကို performance ကိုညွှန်ကိန်းများkpisပရိုမိုးရှင်းဖြစ်ရပ်များဆက်စပ်လင့်ခ်များစီစဉ်ခြင်းလူမှုရေးလမ်းကြောင်းများလူမှုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလူမှုမီဒီယာ alignment ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာလမ်းကြောင်းများဆိုရှယ်မီဒီယာအကြောင်းအရာဘဏ်လူမှုမီဒီယာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလူမှုမီဒီယာ KPIsဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်ယက်များလူမှုမီဒီယာ playbookလူမှုမီဒီယာ postလူမှုမီဒီယာအစီရင်ခံဆိုရှယ်မီဒီယာသုတေသနလူမှုမီဒီယာအချိန်ဇယားဆွဲလူမှုမီဒီယာအဆင့်များဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းဗျူဟာခြေလှမ်းများ
သင့်အား Instagram ကိုပိုနှစ်သက်ပြီးနောက်လိုက်များပိုမိုရရှိစေရန်ကူညီလိမ့်မည်
၂၀၁၄ B2014B ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရည်မှန်းချက်များ၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း၊ လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ